IMedwyn, indawo epholileyo kodwa ephangaleleyo yasemaphandleni
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguJulie
I-cottage yemveli kwindawo ephambili, iMedwyn isandula ukulungiswa yaya kumgangatho ophezulu kakhulu ukuze ibonelele ngendawo yokuhlala yokuzenzela ukuya kuthi ga kwiindwendwe ezi-4 kwinqanaba elinye. Ifakwe kwilali yolondolozo yaseCoulter, le ndlu inegadi yabucala ebiyelweyo ilungele inja enye eziphethe kakuhle kwaye inika iimbono phezu kwamasimi kunye nemithi. Emnyango kukho iinduli ezintle kunye noMlambo iClyde, ngelixa iindawo ezinomtsalane zase-Edinburgh naseGlasgow zikwafikeleleka ngokulula. Ubuncinci ubusuku obu-3 bokuhlala.
Ikhitshi elixhotyiswe kakuhle linobushushu obuphantsi komhlaba, umatshini wokuhlamba, isitya sokuhlamba izitya kunye ne-microwave, ngelixa igumbi lokuhlala elipholileyo liqhayisa ngesitshisi selog kunye neengcango zaseFransi eziya egadini. Kukho igumbi lokutyela elahlukileyo elivulekileyo kunye negumbi lokuhlambela elenziwe ngokwesiko elibonelela ngeenyawo kwishawari kunye nebhafu yesiliphu yokuma yasimahla. Igumbi lokulala elinye linebhedi enkulu enokwahlulwa ibe ziibhedi ezimbini ezincinci (2 ft 6” x 6ft) ilungele abantwana okanye abantu abadala abancinci, kwaye igumbi lokulala elinesibini linebhedi ephindwe kabini. Izibonelelo ezongezelelweyo ziquka iWifi, iTV eneFreeview kunye neDVD player, kunye neBluetooth system sound. Ukufudumeza okuphakathi kwe-oyile kufakwe kuyo yonke ipropathi kwaye kukho indawo yokupaka ethe cwaka esitratweni ekufuphi ngqo nendlwana.
Ukubonelela ngeendawo ezisemaphandleni kwindawo efikelelekayo, iMedwyn ihlala kwilali yolondolozo yaseCoulter kufutshane nedolophu yentengiso yaseBiggar. Ngaphandle nje kwe-A702, indlwana ikwindawo efanelekileyo yohambo lwemini ukuya e-Edinburgh naseGlasgow, ngelixa i-Dumfries entle kunye neGalloway kunye ne-Scottish Border nazo zifikeleleka ngokulula. Ilali yaseCoulter ngokwayo ijikelezwe ziinduli ezintle kakhulu zokuhamba kunye nokukhwela ibhayisekile entabeni kwaye uMlambo iClyde ukufuphi ekulobeni iitrout. Ngaphandle kwezi ndawo zasemaphandleni iMedwyn kukuhamba nje kwemizuzu eli-10 ukusuka kuhola wendlela uM74 nakwindlela ephambili eya e-Edinburgh nakwimpuma mpuma yeSkotlani. Indawo yelifa lehlabathi laseNew Lanark kukuhamba ngemizuzu eli-15.
Ixesha lokubhalisa xa ufika: 17:00 - 20:00
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- South Lanarkshire